Yohane 10 NA-TWI - Oguanhwɛfo pa no - “Mereka nokware - Bible Gateway
Yohane 9Yohane 11
Yohane 10 Nkwa Asem (NA-TWI)
10 “Mereka nokware akyerɛ mo, onipa biara a ɔmfa nguandan kwan ano na ɔforo kɔ mu no yɛ owifo. 2 Onipa a ɔfa ɔkwan ano kɔ mu no ne oguanhwɛfo no. 3 Ɔpon no anohwɛfo no bue pon no ma no, na sɛ ɔfrɛ nguan no nso a, wɔte ne nne ma ɔde wɔn fi adi. 4 Sɛ ɔde wɔn fi adi a, odi nguan no anim na nguan no nso di n’akyi, efisɛ, wɔte ne nne. 5 Wɔrenni onipa foforo biara akyi. Na sɛ ɔfrɛ wɔn a, wɔremma, efisɛ, wɔnte ne nne.”